Rwendo rweSudan | Kufamba Nhau
Mariela Carril | | Africa, Chii chekuona
Sudan iyo nyika yeAfrica yenzvimbo dzinoshamisa. Haisi nzvimbo yekushanya per seIzvo ndezve vafambi uye vafambi vasina kutya, asi kana iwe uri muboka iri pasina mubvunzo Sudan iri kuzokupikisa.
Saka nhasi tichaenda kunoona zvakaita Sudan uye chii chatingaite mairiKana tichigona kuwana vhiza uye nekupfuura naro.
Africa inyika yakapfuma zvekuti yakagara ichishandiswa nemasimba eEurope. Nyika idzi dzine nyika dzakapakata zvombo uye dzakapakata zvombo, dzakabatanidzwa nechisimba vanhu vavengi kwemazana emakore, dzakasimudzira hondo dzevagari vemo, coups uye runyorwa rurefu lwenjodzi dzisina kupera zvakanaka kukondinendi iyi mukati.
Sudan muenzaniso. Nyika dzekoloni padzakakamura Africa vakaumba Sudan nekusanganisira vanhu vechiMuslim kubva kuchamhembe neavo vanobva kumaodzanyemba, zvishoma zvakafanana. Saka iyo Hondo yevagari vemo kwave kungogara kwenguva refu, saka mu2011 South Sudan yakazvimiririra. Makakatanwa akaenderera kumadokero uye chete gore rakapera rakapedza hutongi hwemakore gumi.
Senge Africa yese Sudan ine nzvimbo dzakasiyana siyana, kubva kumakomo kusvika kuma savanna, vachipfuura nemuhurukuro. Iyo zvakare ine yakakosha tsika dzakasiyana uye zvinofanirwa kuyeukwa kuti inyika yehumambo hwekare. Nhasi Yakakamurwa kuita matunhu mashanu: pakati, Darfur, kumabvazuva, Kurdufan uye kuchamhembe.
Central Sudan inoisa simba mune zvematongerwo enyika, zveupfumi uye zvetsika nemagariro sezvo heino iyo guta guru, Khartoum. Guta ndipo panosangana Blue Nile neWhite Nile. Iri iguta rakakura rakaumbwa nekubatana kwemaguta matatu akapatsanurwa neNairi nemaoko ayo maviri. Khartoum ndomumwe wavo, chigaro chehurumende, uye chikamu chayo chekare chiri pamahombekombe eWhite Nile, nepo nharaunda nyowani dziri kumaodzanyemba.
Kuti ushanyire Sudan unoda vhiza, saka hongu, iwe unofanirwa kupfuura nemumiriri kana mumiriri kuti uzviite. Kana iwe ukaiwana uye ukapinda munyika kuburikidza neKhartoum asi waronga kuenda mberi, uchafanirwa kunyoresa uye kugadzirisa mvumo chaiyo, uchangosvika. Ndokunge, mukati memazuva matatu anotevera kubva pakusvika kwako unofanirwa kunyoresa kumapurisa, uye iwe unogona kuzviita zvakananga kunhandare kuti ubvise.
Kuti uzive uye ushanyire guta guru iwe unofanirwa kushandisa matekisi, makombi kana emidhudhudhu. Hakuna zvikepe zvetaxi zvinobatanidza maguta nenzvimbo dzavagere parwizi, chete chikepe chinobatanidza Khartoum neTuti Island, pakati peBlue Nile. Kufamba kwakaoma nekuti kune maguta matatu uye pamwe chete makuru. Asi chii chaunogona kuona muguta guru? Unogona kufamba iyo Mugwagwa waNire, pamahombekombe eBlue Nile, yakakomberedzwa nezvivakwa zvekoloni, iyo National Museum, miti nevanhu vazhinji vanofamba famba.
Iwe zvakare unofanirwa kushanyira iyo Sudan Presidential Palace Museum, mumapindu eImba yeMutungamiri, iyo Kuchinja kweGadhi, mutambo unoitika paChishanu chekutanga chemwedzi wega wega, iyo kusangana kweNiles mbiri, inonzi Al-Mogran, iyo inogona kuoneka kubva pabhiriji resimbi uye zvinoenderana nezvavanotaura iwe unogona kunyange kusiyanisa musiyano muvara pakati pezviviri (ehe, kwete mapikicha nekuti ndiani anoziva nei zvichirambidzwa), kune zvakare Al-Mogran Mhuri Paka, musika we Souq Arabi, hombe, iyo Commonwealth War Cemetery, nemakuva mazana mana emaBritish akafa muEast Africa Campaign ya400-1940, kunyangwe paine zvekare kubva muzana ramakore rechi41.
Muguta re Omdurman kune zvakare musika wakakura, iyo Casa del Kalifa, ikozvino miziyamu uye Sufi mutambo wekutamba, ane mavara, akakodzera kwazvo kutorwa mifananidzo. Nechekare munzvimbo yekuchamhembe, Bahri, unogona kuona chiitiko chehondo, iyo Nuba Fight, uye musika weSaad Gishra. Zvikasadaro mumasikati masikati iwe unogona kunwa tii paNile avenue, kune dzimba zhinji dzetii nemakamuri kana kudya kunze. Kuve iri nyika zhinji yechiMuslim kuwana doro kunonetsa saka ungangove unove mutengesi panguva yekugara kwako.
Zvino, zvirokwazvo hauna kufunga nezveSudan kungoziva guta rayo. Chokwadi ndechekuti budiriro pano inotora zviuru zvemakore uye yave iri nyika yehumambo hwakawanda, hwakasimba kwazvo hwaive hwaNapata Kingdom, kumashure muzana ramakore rechisere BC.XNUMXth century AD nehumambo hweIslam. Zvisaririra zvehumambo izvi zvichiri kuoneka nhasi uye kune nzvimbo zhinji dzekuchera matongo pakati pekuchamhembe nekumaodzanyemba kwenyika.
Ngatione, pakati pe tourist destinations Sudan ine chii? Sai, chitsuwa chiri kumaodzanyemba kwechipiri cataract netembere, zviyeuchidzo nemakuva kubva pakutanga Stone Age uye nharaunda yaFarao, kusvika kusvika kweOttoman Humambo. Sadinga Inotarisa nhaka yeharahara kunyangwe paine chimwe chinhu cheumambo hweMeroetic neNapatan. Soleb zvimwe chete. Vhura Tumbus Zvinyorwa zveEjipitori zvakawanikwa pamatombo padyo nekati yechitatu.
Imwe yenzvimbo dzinonyanya kukosha dzekuchera matongo muSudan ndiyo Karma. Kune zvivakwa zvakakura pano uye zvese zvakadzokera kuzana rechitatu ramakore BC. Tabo Icho chiri paArgo Island, kumaodzanyemba kweyechitatu cataract, uye iine Kushite tembere uye zvekare zvinhu zvekufambidzana kubva kuMeroetic uye echiKristu nguva. Kawa yakafanana negirazi reIjipita mukuvakwa, iri zvakare Dongola, guta guru reNubian Christian Kingdom, Mayuria, ine mosque yaimbove chechi, dzimbahwe, makuva nedzimba dzekare.
Guta rechitendero cheMambo weNapata raive Jebel Al - Barka uye iri padyo nemvura yechina. Hezvino izvo dzimba dzemadzimambo, temberi, mapiramidhi nemakuva kubva munzvimbo dzakasiyana pakati peiyo Pharaonic, Napatan uye Meroetic nguva. Nzvimbo yeNuri ine mapiramidhi nemakuva emadzimambo kubva kuimba yaNapatan. Iyo Al-Kuru makuva Ivo vane mukurumbira kwazvo, nematombo avo akavezwa emadzimambo ekutanga aNapatan.
Kune rake chikamu site of Al - Ghazali Iri mune oasis muBayoudah makiromita mashoma kubva kuguta reMerowe uye ine zvisaririra kubva kunguva yechiKristu. Merowe pachezvayo ndiro guta guru rehushe hweKush saka rave naro mapiramidhi, tembere uye zvisaririra sezvo raive guta chairo. Nzvimbo yakanaka yekutora mifananidzo iri Musawarat Yero, nzvimbo yaive nzvimbo yekunamata yakatangira panguva yeMeroetic uye yakanyorwa matembere uye chivakwa chihombe chemabwe.
Kufamba wakasununguka muSudan hakusi nyore Uye ini handizive kana haina kukurudzirwa futi. Yakanakisa ndeye bhuku rwendo Sezvo kushanyira nzvimbo mu Africa dzisiri pamepu yevashanyi kunogona kunge kwakaomarara uye kuunza matambudziko akawanda kupfuura mhinduro. Chii chimwe, Sudan haina zvivakwa zvakanaka zvemufambi akazvimirira. Kunyangwe iwe uchihaya kushanya, iyo agency inogona kubata zvimwe zvesaisa kwauri, ita chikumbiro chekuti iendeswe kwauri kunhandare, semuenzaniso.
Un zvakajairika kushanya Anotanga Khartoum uyezve ramba uchienda kuchamhembe, murenje, wakanangana ne Dhembera Dongola, pakati nepakati peguta guru reSudan nemuganhu weEjipitori. Ndiwo moyo wechiKristu muSudan. Hazvishamise kuti nzvimbo ino ive isina chinhu, kunyangwe ichikosha, saka inotyisa. Rwendo rwunoenderera mberi zuva rinotevera pa Kush, Nyika yeNubian pakati pekutanga uye yechina mapopoma eNairi.Muzinda weMambo weKush wekare pano matongo eKerma, nzvimbo hombe uye yakanaka yekuchera matongo.
Rwendo runoenderera mberi Wawa musha kupedza husiku uye kushanyira Tembere yaSoleb mambakwedza, achifamba pamhenderekedzo yeNairi pakati pemiti yemichindwe, achitora chikepe chidiki uye achigadzira nzira nemuminda yakasimwa gorosi kusvikira wasvika kutembere uchibva kunochenesa zuva kuburikidza nemakoramu awo. Iyi tembere yakavakwa na pharao Amenotep III, iye mumwechete iye akatanga iyo Tembere yeLuxor, uye kunyangwe iri yakadzikama ichiri yakanaka uye ingangoita yemashiripiti.
Iko kunewo Mapiramidhi eNuri, yakashanyirwa pazuva rechitatu rerwendo rwakajairika, pakati pemadunduru, yakavakwa pakati pezana ramakore rechinomwe nerechisere BC, yekare muOld Nubia. Inoteverwa pazuva rimwe chetero nekushanya gomo dzvene reJebel Barkal, ine maonero asinganzwisisiki eNairi, mapiramidhi ayo netemberi.
Kubva 2003 ndizvo Nhaka Yenyika nezvose zvakanaka. Pakupedzisira, kushanya kunoenderera uye kunotizivisa iyo mapiramidhi eMeroe, 200 anodakadza zvivakwa zvemakore anopfuura 2500, nzvimbo yemashiripiti, tembere yeMusawarat iSufra nematombo ayo akavezwa semhuka uye Tembere yeNaqa murenje.
Ichokwadi ndechekuti seSudan haisi nzvimbo yekushanya kune zvinyorwa zvishoma nezve nyika nehupfumi hwayo, asi kana iwe uchitsvaga uye uchida kuve uri wega wega pakati pematongo, asingadaro, usazeze kuronga rwendo runoshamisa. kune ino inoshamisa uye ine nhoroondo nyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » Africa » Sudan rwendo
Maguta akanaka kwazvo muFrance